प्रकाशित: माघ ९, २०७७ / 392 पटक पढिएको
मुहान दर्ता तथा अनुमतिको लागि धरान ४ स्थित खानेपानीको मुहान अध्यनय गर्दै प्राविधिक समिति ।
धरान: खानेपानीको चरम अभाव रहदै आएको धरानमा ७० भन्दा बढी खानेपानी उपभोक्ता समितिहरु छन् । ती उपभोक्ता समितिमार्फत अधिकांश क्षेत्रका नगरबासीहरुले पानी उपभोग गरिरहेका छन् ।
विगतमा कतिपय उपभोक्ता समितिहरु खानेपानी डिभिजन कार्यालयमा दर्ता थियो । अब भने नयाँ संघीय संरचना अनुसार स्थानीय तहमा दर्ता हुनुपर्छ । यही व्यवस्थालाई आधार बनाएर धरान उपमहानगरले खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ कार्यपालिकाबाट पास भइसकेको छ । अब मुहान उपभोग गरिरहेका उपभोक्ता समितिहरु उपमहानगरपालिकामा दर्ता हुनुपर्छ । वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार यसरी स्थानीय तहमा दर्ता हुँदा दातृ निकायबाट खानेपानीको परियोजना आउदा ती उपभोक्ता समितिहरुले सुविधा पाउछन् । ‘पहिला खानेपानी तथा डिभिजन कार्यालयमा दर्ता हुन्थ्यो, अब स्थानीय तहमा अधिकार छ । कार्यपालिकाले कार्यविधि पनि पास गरिसकेको छ,’महशाखाका वातावरण निरीक्षक राजु चौहानले भने ।
कार्यविधिले विगतमा खानेपानी डिभिजनमा दर्ता भएका उपभोक्ता समितिलाई यही कार्यविधि अनुसार मानेर नवीकरण गरिदिने व्यवस्था गरेको छ । नयाँ उपभोक्ता समितियले भने दर्ता हुनुपर्छ । कार्यविधि अनुसार मुहान दर्ताको लागि २ वटा निवेदन उपमहानगरमा आइसकेको महाशाखाले जनाएको छ । त्यसमध्ये धरान १३ स्थित भालुखोला खानेपानी उपभोक्ता समितिलाई दर्ता प्रक्रियाको लागि प्राविधिक समितिले स्थलगत अध्ययन पनि गरिसकेको छ । यो उपभोक्ता समिति धरान १३ को भएपनि मुहान धरान ४ मा छ ।
प्राविधिक समितिले मुहान प्रयोग गर्न ठिक छ, छैन ? माग वमोजिम जनसंख्यालाई पानी पर्याप्त छ छैन ? गुणस्तर कस्तो छ ? लगायत अध्ययन गर्ने उनले बताए । वातावरण निरीक्षक चौहानका अनुसार प्रविधिक समितिले स्थलगत अध्ययन गरेपछि कार्यपालिकामा सिफारिश गर्छ । सिफारिशको आधारमा कार्यपालिकाले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘दर्ता गर्दा मुहानको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ, प्राविधिक समितिले अध्ययन गरेपछि कार्यपालिकाले मुहानको स्वीकृति दिने, नदिने निर्णय हुन्छ,’ चौहानले भने ।